December 2, 2016 – ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ(မူကြမ်း)အား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ
Posted on December 2, 2016 (March 12, 2020) by bgoper
(၂.၁၂.၂၀၁၆) ရက်၊ (သောကြာ) နေ့၊ နံနက် (၁၀:ဝဝ) နာရီအချိန်တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ဥပဒေပြုရေးကော်မတီနှင့် စီးပွားရေး၊ စည်ပင်သာယာရေးနှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ(၂)ရပ်တို့သည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ(မူကြမ်း)အား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ […]
မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ပျက်စီးသွားသော ကုလားတက်ထွန်းအုပ်စု၊ ဂုံးတံတားနှင့် ရေတံခါးအား သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့
Posted on December 2, 2016 by bgoper
နတ်တလင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်ဦးသည် (၁၁) လပိုင်းကာလ၌ နတ်တလင်းမြို့နယ်အတွင်း မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ပျက်စီးသွားသော ကုလားတက်ထွန်းအုပ်စု၊ ဂုံးတံတားနှင့် ရေတံခါးအား သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်။ […]
ကျောင်းဆောင်သစ် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ပြီး စက်ခလုပ်နှိပ်ဖွင့်လှစ်ပေးအပ်ခဲ့
(၂.၁၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် ပြည်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသက်ဝင်းလှိုင်သည် ပြည်ခရိုင်NLDအတွင်းရေးမှူး ဦးမြင့်သန်းထွန်းတို့နှင့်အတူ ဝါရုံရပ်ကွက် ဝါရုံမူလတန်းလွန်ကျောင်း၌ကျင်းပသော ရတနာဆောင် ကျောင်းဆောင်သစ် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ပြီး စက်ခလုပ်နှိပ်ဖွင့်လှစ်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ […]
ရွေ့လျားပညာ​ရေးနှင့် ​လူကုန်​ကူးမှုပ​ပျောက်​​ရေးအသိပညာ​ပေး​ရေးသင်​တန်းဖွင့်​ပွဲသို့ တက်​​ရောက်​ခဲ့
ကျောက်ကြီးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မင်းဦး (ခ) ဦးတင်ဆန်းဦးသည် (၂. ၁၂. ၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာဦးစီးမှူးများနှင့်အတူ ကျောက်ကြီးမြို့၊ မေတ္တာရပ်ကွက်၌ Samaritan’s Purseနှင့်ရွှေကျင်ကရင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်သာသနာအဖွဲ့ CSSDD တို့မှဦးဆောင်ကျင်းပသည့် ရွေ့လျားပညာရေးနှင့် လူကုန်ကူးမှုပပျောက်ရေးအသိပညာပေးရေးသင်တန်းဖွင့်ပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ […]